Dhamma Yanant: တစ်ထိုင်တည်း တရားနာရုံနဲ့ ဘာလို့ တရားထူးရ
This entry was posted on 9:01 PM and is filed under article . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
On Wednesday, December 09, 2009 1:12:00 PM , tknn said...
ဒီပို့စ်လေးကို www.tknn.org မှာ ပြန်တင်ထားပါတယ်။ ဓမ္မရနံ့ဘလော့မှ ကူးယူဖော်ပြသည် ဆိုတဲ့ စာတန်းလေးလဲ ထိုးထားပါတယ်။ ခွင့်ပြု နားလည်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။